Qof kasta oo ku nool Norwey isaga ayey waajib ku tahey inuu wax ka ogaado, sharciyada iyo qawaaniinta wadanka. Sidoo kale qofka waxaa ku waajib ah inuu sheego warbixin sax ah marka qof dawladda u shaqeeyaa ka codsado.
Dhammaan dadka deggen Norwey waxa ay leeyihiin xuquuq iyo waajibaad badan
Tani waxay tahay tusaale ahaan in dhammaan carruurtu ay xaq u leedahay iskuul, iyo in dhamaan xaq loo leeyahay daaweynta cusbitaalka. Dhammaan inta shaqaysa waxa waajib ku ah in ay bixiyaan cashuur sannad kasta. Marka aynu soo gudbinayno wixii ina soo galay sannad kasta, waxa inagu waajib ah in aynu sheegno war sax ah.
Nidaamku wuxu ku dhisan yahay is-aaminaad
Dawladdu waxay aamintaa bulshadu in ay siiso warbixinno sax sharciga na ay raacaan. Dhammaan nidaamka Norwey wuxu ku dhisan yahay qaacidadaas. Wallow ay jiraan nidaam wax lagu kantoroolo, in tijaabo ah ayuun baa la qaadaa. Dadka lagu qabto inay qiyaanaan nidaamka, waxa ay mustaystaan ciqaabon kala duwan. Waxa ay noqon kartaa ganaax, xadhig, ciqaab shaqo ama wax u dhigma.